Motorola waxay cusbooneysiisaa Moto Z, G Plus 4 iyo lix kale Android Oreo | Androidsis
Motorola waxay aad u mashquulsanayd toddobaadyadan diyaarinta cusboonaysiinta 'Android Oreo' qaar ka mid ah taleefannadooda. Marka lagu daro diyaarinta bilaabida imaan doonta sanadka 2018. Shirkada hada wey yaabtay cusbooneysiinta wadarta moodooyinka cusub ee Android Oreo. Sidan oo kale, shirkaddu waxay dooneysaa inay soo ceshato muuqaalkii wanaagsanaa ee ay ku lahaayeen cusbooneysiinta.
Waayo, tiro qalab ah oo ay ku jiraan Moto Z, Z2 Play, G Plus 4 iyo kuwo kale ayaa bilaabay inay cusboonaysiiyaan Android Oreo. Marka adeegsadayaasha leh mid ka mid ah taleefannadan ayaa dhowaan ku raaxeysan doona nooca ugu dambeeya ee nidaamka qalliinka.
Maalmo ka hor Motorola waxay bilawday inay cusboonaysiiso Moto X4. Hadda, waqtigan ka dib, shirkaddu waxay ku dhawaaqeysaa in cusbooneysiintu ay bilaabeyso inay gaarto siddeed nooc oo dheeri ah. Marka xaqiiqdii waxay ku mashquuli doonaan cusboonaysiinta toddobaadyada soo socda. Noocee noocee ah ayaa loo cusbooneysiiyaa Android Oreo?
Marka lagu daro Moto X4 ee horay loo soo sheegay, kuwa kale Qalabka Motorola ee lagu casriyeyn doono Android Oreo waa:
Moto Z2 Ciyaaraha
Liiska waxaan ka helnay wax walba oo yar. Maaddaama ay jiraan taleefannno la sii daayay 2016 iyo 2017. Intaa waxaa dheer, waxaa jira moodello heer sare ah iyo heer dhexdhexaad ah. Marka shirkaddu waxay dooratay noocyo kala duwan oo cusbooneysiin ah. Sida aad u jeeddo, taxanaha E ayaa laga reebay liiska.
Haddii aad haysato mid ka mid ah taleefannada ku raaxeysanaya cusbooneysiinta, waad awoodaa tag goobaha oo raadso cusboonaysiinta gacanta. Horey waxaa u jiri kara isticmaaleyaal ku raaxeysan kara. Haddii kalese waxay noqon doontaa arrin maalmo kooban ah.
Marka lagu daro cusbooneysiinta Android Oreo waxay sidoo kale soo bandhigeen dhejiska amniga Diseembar. Si looga ilaaliyo adeegsadayaasha hanjabaadaha kala duwan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Noocyada Android » Motorola waxay cusbooneysiineysaa Moto Z, Z2 Play, G Plus 4 iyo in ka badan oo ah Android Oreo
Waxba ma cusbooneysiiyaan G4 Play? Yaab yaab
Android Oreo ayaa ugu dambeyntii dhaaftay 1% korsashada
Android P waxaa ku jiri doona hawl hooyo si loo duubo wicitaanada